Yiziphi Izinyathelo Zokusebenza Kokusebenza Okuseshayo Okuphumelelayo Kufanele Ngifinyelele?
Ukusebenza kahle kwe-search engine (noma i-SEO) kudinga ulwazi olusisekelo lwezibuyekezo ze-algorithm ukuthi i-Google ivela njalo. Umsebenzi ngamunye we-SEO kufanele abe namakhono okwehlukanisa ukuthi iyiphi yezinguquko ezikhona eziyishumi okumele ziqaliswe ukuze zifinyelele umgomo wokugcina ekupheleni komkhankaso we-SEO. Lolu lwazi luzokusiza ube ngcono ekunqumeni ukuthi yiziphi izinyathelo okufanele uzifeze nge-SEO ephumelelayo.
Esihlokweni samanje, ochwepheshe be-Semalt bayokutshela ngamasu asebenzayo okusebenza ngokusesha injini esebenza ngo-2017. Funda ukuze wazi bonke. Ngakho-ke, ake siqale.
Ama-Methodology we-SEO amathathu asebenzayo Ongayisebenzisa Right Now
Latent Semantic Indexing, eyaziwa nangokuthi i-LSI, indlela eyaziwayo ye-SEO ephathelene nokunquma ubuhlobo phakathi kwemibono nemigomo kokuqukethwe. Isiza iGoogle namanye ama-injini yokusesha ukuhlukanisa izincazelo eziningi zamagama nemisho ethile.
Kalula nje, i-LSI ibukeka ngama-synonyms ahlobene namagama angukhiye ekhasini lewebhu.
Ngisho noma i-LSI isetshenziswe eminyakeni engaphezu kwamashumi amabili edlule, lo mkhuba usuzuzisa nakwi-SEO yanamuhla. Amagama angukhiye e-LSI ahle ekuthuthukiseni isimo se-Google samakhasi akho wewebhu. Ngaphezu kwalokho, zithuthukisa ukuthi kungenzeka ukuthi isikhundla sezinsiza zakho sizohlala isikhathi eside ku-SERP futhi sivikele isayithi lakho kusuka esihlalweni.
2. Amagama angukhiye e-Header
Leli libuye lizuzise kakhulu imiphumela engcono ye-SEO, nakuba iqala ukuqala ngasekupheleni kweminyaka engu-90. Abaningi bezobuchwepheshe be-SEO basikisela ukufaka leli qhinga emisebenzini yakho yezinsuku ze-SEO kusukela lapho izinjini zifuna ukuthi izihloko zifake izinkomba ezihlokweni eziyinhloko zekhasi.
Sekuyiminyaka, amathegi asemqoka kuphela e-SEO abe yi-H1 no-H2. Izinto zishintshile ngokuhamba kwesikhathi. Namuhla, kunamathegi angu-6, kusukela ku-H1 kuya ku-H6 - ngayinye ibonisa ukunciphisa ukubaluleka. I-H1 ingenye ebaluleke kakhulu, kufanele isetshenziswe kuphela kanye nekhasi ngalinye, ngokujwayelekile isihloko seposi. Isici ngasinye esihlokweni esilandelayo kufanele sisetshenziswe njenge-subcategory yesinye ngenhla.
3. Cabanga ngokuxhumanisa neziphathimandla ezigunyaziwe
Akunakuphika: izixhumanisi eziphumayo zithuthukisa iwebhusayithi yakho kanye negunya uma lisetshenziswe kahle. Ngamazwi alula, izixhumanisi eziphumayo yizo izixhumanisi ezikhomba kwezinye izizinda kusuka kuwebhusayithi yakho. Ukuxhuma kumasayithi wegunya kukusiza u-Google ukuba aqonde i-niche yakho kanye nokwandisa ikhwalithi yesayithi lakho, elidlala indima ebalulekile ku-SEO yakho yesayithi.
Ukuxhumanisa neziphathimandla zamasayithi kungenye yezindlela ezingcono zokuxhumana ngokubambisana namabhizinisi ase-intanethi ane niche efanayo.
Ukwenza i-SEO yakho iphumelele akuyona inzima njengoba kungabonakala ekuqaleni. Ukunamathela ezinconyweni ezibalulwe ngenhla kuzokusiza ukuthi udale isu elingcono le-SEO kunalokhu okwamanje usebenzisa.
Uma unemibuzo noma ufuna ukwabelana ngamasu wakho we-SEO asebenzayo nathi, ungabi namahloni okuxhumana neqembu lethu le-Semalt Source . Sithanda ukuzwa kusuka kubafundi bethu!